I-MSK (Tianjin) Cutting Technology CO., LTD
Spot drill izingcezu
isinyathelo sokuprakthiza izingcezu
I-Twist Drill Bits
T slot ekupheleni Mill
I-Flat Head End Mill
I-Round Nose Milling Cutter
Yasungulwa ngo-2015, i-MSK (Tianjin) International Trading CO., Ltd ikhule ngokuqhubekayo futhi yadlula ukuqinisekiswa kwe-Rheinland ISO 9001.
Ngezikhungo zokugaya ezisezingeni eliphezulu ze-SACCKE ze-German SACCKE, isikhungo sokuhlola amathuluzi e-German ZOLLER esinama-axis ayisithupha, umshini waseTaiwan PALMARY neminye imishini yokukhiqiza ethuthukisiwe yamazwe ngamazwe, sizibophezele ekukhiqizeni ithuluzi le-CNC eliphezulu, eliwuchwepheshe nelisebenza kahle.
Okukhethekile kwethu ukuklama kanye nokukhiqizwa kwazo zonke izinhlobo zamathuluzi okusika i-carbide aqinile: Izigayo zokugcina, izinsimbi, izixhumi, ompompi namathuluzi akhethekile.
Ifilosofi yethu yebhizinisi iwukuhlinzeka amakhasimende ethu ngezixazululo eziphelele ezithuthukisa ukusebenza kwemishini, ukwandisa ukukhiqiza, nokunciphisa izindleko.Isevisi + Ikhwalithi + Ukusebenza.
Ithimba lethu Lokubonisana liphinde linikeze ngolwazi lokukhiqiza, olunohlu lwezixazululo ezingokwenyama nezidijithali ukusiza amakhasimende ethu ukuthi azulazule ngokuphepha ekusaseni lemboni 4.0.
thatha indlela engokoqobo yokusebenzisa amazinga aphezulu okusika insimbi ukuze unqobe izinselele zamakhasimende.Ubudlelwano obakhelwe phezu kokwethembana nenhlonipho bubalulekile empumelelweni yethu.Sisebenzisana eduze namakhasimende ukuze siqonde izidingo zabo.
Ukuze uthole ulwazi olwengeziwe mayelana nanoma iyiphi indawo yenkampani yethu, sicela uhlole isayithi lethu noma usebenzise isigaba sokuxhumana nathi ukuze uxhumane nethimba lethu ngokuqondile.
Sinabasebenzi abangaphezu kuka-50, ithimba lonjiniyela be-R&D, onjiniyela bezobuchwepheshe abaphezulu abayi-15, abadayisi bamazwe aphesheya abayi-6 kanye nonjiniyela benkonzo yangemva kokuthengisa abayi-6.